Valiny fitsapana antso-to-hetsika miaraka amin'ny Hubspot | Martech Zone
Valiny fitsapana antso-to-hetsika miaraka amin'ny Hubspot
Mahagaga foana ny mahita fa ny fahasamihafana misongadina amin'ny antso atao dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny taham-pivoarana sy ny fanovana. Iray amin'ireo faritra ao Hubspot fa tsy mino aho fa olona marobe no manararaotra tanteraka ny sehatry ny Call-To-Action.
Ho tsikaritrao ny fiantsoana tokana an'i Martech eo ambanin'ny tongony eo amin'ny tsanganana ankavia. Notsapainay ny kinova telo an'ny antso-to-hetsika mitovy amin'izany. Nitovy tanteraka ny fandefasan-kafatra fa samy hafa ny lokony. Ny iray dia volavola mainty izay nampifanohitra be ny pejy ary ny iray kosa saika nitovy - nanova ny lokon'ny bokotra fotsiny.
Mahaliana ny valiny - ny CTA miaraka amin'ny bokotra maitso dia mihoatra ny in-droa ny CTA hafa! Ny tsindry bokotra maintso dia niteraka tsindry vitsy kokoa, fa taha ambony kokoa kosa.
Fitsapana kely ity izay tsy niovantsika afa-tsy ny loko… hanohizanay manatsara ny CTA miaraka amin'ny kinova samihafa amin'ny loko maro kokoa ary miovaova ny andrana mba hanatsara ny valiny. Fantatray ihany koa fa ambany dia ambany ny tahan'ny tsindry ankafiziny… koa manana asa hatao amin'ny asantsika an'io CTA io izahay. Ao amin'ny toerana henjana izy io ary tsy mifandraika amin'ny atiny manodidina azy foana.
Hubspot dia manamora ny fanandramana. Azonao atao ny manisy dikanteny maro an'ny antso-to-hetsika ho an'ny mpampifandray azy ireo ary avy eo atsofohy fotsiny ilay script omeny ao amin'ny tranonkalanao. Hubspot manome ihany koa ny fomba hikendrena ireo mpitsidika manokana hiantsoana andraikitra… fa lahatsoratra hafa kosa izany!
Fanamarihana: DK New Media dia voamarina Hubspot Fahafahana misafidy.
Tags: ab testingmiantso amin'ny asaantso ho amin'ny fitsapana hetsikahubspotfitiliana
Mitandrema - Tsy miraharaha ny longtail-nao ny Console Fikarohana Google
Jan 15, 2013 ao amin'ny 10: 51 AM
Tsy fantatro fa Hubspot Agency Doug ianao! Mampiasa Hubspot izao izahay amin'ny http://www.tynerpondfarm.com fa nieritreritra ny hifindra. Afaka miresaka momba izany tsy ho ela ve isika? Tsy mahazo ny valiny tadiavinay izahay fa mety diso izany….
15 Jan 2013 amin'ny 6:54 PM
Marina izany. Nampihatra ny Hubspot, Pardot, ActOn, Marketo ary Eloqua izahay niaraka tamin'ireo mpanjifanay @chrisbaggott: disqus :). Mazava ho azy fa tsy fantatry ny orinasa Indiana izany satria manakarama masoivoho avy amin'ny fanjakana hafa izy ireo, lol.